Ho karemy fiverenana anie ity karemy ity ho anao - Ambatonakanga - FJKM Tranovato Ambatonakanga
Tafiditra amin’ny vanimpotoanan’ny KAREMY isika Fiangonana kristiana ankehitriny. Omena efapolo andro isika, satria izany no hevitra ara-bakitenin’ny hoe Karemy (avy amin’ny teny latina hoe « quadragesima », izay midika hoe fahaefapolo [andro]). Mampatsiaro ny « quarantaine » tsy maintsy hanokana-monina mandritra ny andro maro ireo olona ahiana ho mitondra tsimokaretina sarotra sitranina mety hahafaty haingana sy hamindra amin’ny mpiarabelona aminy !
KAREMY: efapolo andron’ny fandinihan-tena.
Efapolo andron’ny fibebahana. Efapolo andron’ny fivalozana noho ny ditra amam-paharatsiana niainana. Efapolo andron’ny fiharetam-panadiovana, mba hanavaozana ny fanahy eo anatrehan’Ilay Masina, izay tsy mba azo anaovana fangalampiery na azo hitsoahana, fa hitsara ny olona rehetra araka ny asany avy. Ataon’ny Fiangonana ny Karemy eo am-panarahana ny dian’i Jesoa, izay nitokana nivavaka sy nifady hanina tany an’efitra efapolo andro sy efapolo alina alohan’ny hanatanterahany ny famonjena an’izao tontolo izao.
Ny fantatry ny maro momba fomba entina miatrika ny karemy dia ny fifadian-kanina (tsy hihinanan-kena na zavatra matsiro), ny tsy fahafahana manao fety na mikorana be (toy ny lanonam-panambadiana). Marina fa fotoana tokony hahalelovana tokoa ny karemy, vanim-potoana ny fisaonana, araka ny teny hoe « Ny fo torotoro sy mangorakoraka, Andriamanitra ô, dia tsy mba ataonao tsinontsinona » (Sal. 51, 17).
Tsy ampy nefa, ry havana, ny manjombon’endrika sy ny malahelo. Efa ianantsika isan’andro ny fisentoana sy ny alahelo noho ny antony izao na izatsy. Izay iantsoana antsika ankehitriny, dia ny hiverenantsika marina amin’Andriamanitra (lohahevitry ny FJKM mandritra voana Martsa). Nahoana? “Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry; samy efa nivily ho amin’ny lalantsika avy isika rehetra” (Isa. 53, 6), ka nanalavitra ny lalan’ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Betsaka ny ohatra azo raisina momba izany, na ny eo amin’ny fiainan’ny isam-batan’olona, na ny eo amin’ny fiainan’ny fiarahamonina, na ny eo amin’ny fiainan’ny Firenena, na ny eo amin’ny fiainan’izao tontolo izao, izay miharihary fa efa nandà an’Andriamanitra sy ny heriny, fa nanangana lalàna araka ny filàn’ny nofony sy ny danin’ny kibony.
Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao!
Ao anatin’izany no antsoina hiverina ho amin’Andriamanitra isika izay mbola tsy mahafoy Azy. Mahatsiaro izany i Asafa ao amin’ny Salamo nohirainy, ka miteny hoe:
“Indro, very izay lavitra Anao; aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy Anao. Fa izaho, dia ny ho akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy; Ianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho”
Sal. 73, 27s
Betsaka ny olona mahatsiaro ny tsy fetezan’ny zavatra ataony. Maro ny olona mahalala ny faharatsiam-piainany, ka malahelo noho ny zava-bitany. Efa tsara izany fahatsiaovan-tenany izany, saingy tsy ampy hahavelona azy. Ny ilaina, dia ny handraisany fanapahan-kevitra tsy misy hatak’andro hiverina amin’ny Tompo. Fa hoy Andriamanitra hoe: “Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory” (Heb. 13, 5). Aoka ho tsaroantsika indray fa ny antony nahatongavan’i Kristy Jesoa teto an-tany dia ny hahazoantsika manatona an’Andriamanitra sy miverina Aminy indray. Fa hoy ny Tompo hoe: “Izay rehetra nomen’ny Raiko Ahy no hanatona Ahy; ary izay manatona Ahy, dia tsy mba holaviko mihitsy” (Jao. 6, 37).
Tsy mba ho anisan’izany ve ianao amin’izao Karemy izao? Aoka ho Karemy fiverenana e!